मेरो भाउजु चिकाई Nepali sex story - Indian Girls Nude XXX Images
मेरो भाउजु चिकाई
केहि बेर् प६इ भौजु म तिर फर्कनु वयो। अनि मलै नसलु नयन् ले हेरेर मुसुक्क हस्नु वयो। भौजु क नजर् मेरो तल्लो वग् तिर गयो। मेरो लिङ उत्तेजित् वयेर मेरो सनो कत्तु नै उचलिरहेको थियो। वौजु ले मलै फेरि नसलु आखले हेर्दै वन्नु वयो” बबु त्यो के हो? हुम्?” भौजु मेरो लिङ् लै इङित् गर्दै बोल्नु वयेको थियो। म लाज् ले केइ बोल्न सकिन। भौजु फेरि बोल्नु वयो “हजुर् को बिवह् त गरिदिनै पर्ने वो! खै मलै देखौनुस् त कस्तो रै६अ हेरु मेरो देवर् बबु को” मैले के गरु के नगरु बुझ्न सकिरहेको थियीन। णवन्दै भौजु ले योउन् को मात् ले मतिदै मेरो कत्तु तल सरिदिनु वयो। अनि मेरो लिङ् देखेर भौजु ले आख चौद पर्नु वयो”बफ् रे बफ्! कति थुलो!” मलै खुसि लग्यो, सयेद् मेरो दै को वन्द थुलो थियो। भौजु ले बिस्तरै मेरो लिङ लै आफ्न दुइ हथ् ले च्यपेर खेलौदै हस्दै वन्नु वयो” दै को वन्द भै को दोब्बर् रहे६अ, कसरि बनौनु वयो येत्रो?” सयेद् भौजु को थौम अरु केति वयेको वये मैले सम्वोग् गरिसकेको हुन्थे तर मलै भौजु सग शरम् लगिरहेको थियो र मलै बोल्न पनि गर्हो परिरहेको थियो। भौजु मजले मेरो लिङ लै मुसर्दै वन्नुवयो” सिकर् कत्तिको गर्नुवयेको ६अ मेरो मत्लव् तपैको गुल ले कति केति को स्वद् लियीसक्यो हुम्?” म वौजु क कुर सुनेर झन् उत्तेजित् वये। मैले वने”आजसम्म कसैसग गरेको ६ऐन।”
मेरो कुर सुनेर भौजुले मलै सन्क को नजर्ले हेर्दै वन्नुवयो”सचि, कोइ सिकर् नमिलेर हो कि? बबु को मन् नवयेर हो?” मैले सर्मौदै वने” भौजु, मलै यो कुर म तेति ध्यन् नै वयेन, पदै ले गर्द” भौजु मलै कर्के नजर् ले हेर्दै मुसुकौदै हुनुहुन्थ्यो। उहको हथ् ले मेरो लिङ निकै मुसरि रहेको थियो। मलै सथि हरुको कुर याद् आयो”सल यो कृस्ने को लदो कुनै केति ले देखे वने सचै पुति बत र्यल् कद्६अन्” मलै अव भौजुले मेरो लिङ तेसै ६ओद्नु होल जस्तो लगेन। उह मसग कुर गरेपनि, उहको ध्यन् पुर मेरो लिङ म नै थियो। येसरि मेरो लिङ मुसरिरहनु वयेको थियो कि मनौ त्यो लिङ बत उहले थुलो काम् लिनु ६अ। उहको पुल्पुल्यायी ले मेरो लिङ मतिदै थियो। भौजु ले बिस्तरै वन्नु वयो” बबु! हजुर् को निकै थुलो रहे६अ, येदि तपैलै आफ्नि भौजु लै चिक्ने मन् ६अ वने म तपैलै अनुमति दिन्६उ। वन्नुस्!” भौजु को यो कुर सुनेर मेरो लिङ जुर्मुर्यौन थल्यो। टर म केइ बोलिन। भौजु मेरो लगि एक्दुम् सम्मनिय मन्६ए हुनुहुन्थ्यो। उहको यो कुरले मलै येति एक्स्कितेद् बनयो कि मेरो लिङ उहको हथ् म कस्सिन पुग्यो। भौजु ले मुस्कौदै भन्नु वयो”आज म मेरो देवर् बबु लै आफ्नै पुति को स्वद् चखौ६उ, हेर्नुस् त हजुर् को गुल हो कि लदो मतियेको।” मैले जिन्दगि म सोचेको थियीन मेरो आदर्स भौजु येस्तो कमुक् हुनुहोल वनेर। टर मलै मन् वित्र निकै खुसि लगिरहेको थियो। भौजु ले मेरो अन्दकोश् खेलौदै वन्नुवयो” चिक्नु हुन्६अ त आफ्नि भौजु लै?” मेरो स्वस् तेज् थियो। म केइ बोलिन। मेरो लगि भौजु सग योउन् सम्पर्क रख्नु आफैम सपन थियो”इत्स् उन्बेलिएवब्ले अन्द् अ्अजिङ् फोर् उस्, थत् फुक्किङ् सोमेओने ओव्न् रेलतिवे अन्द् रेस्पेक्तिवे”
भौजु जुरुक्क उथ्नु वयो अनि मेरो दुइ तङ् को बिच् म घुद मरेर घोप्तनुवयो। म उत्तनो परिरहेको थिये। मलै आफुले हेरेक ब्लुए फिल्म् क याद् आउन थल्यो। मेरो सन्क सबित् वयो। भौजु ले बिस्तरै मेरो लिङ् म आफ्न रत ओथ् ले चुम्बन् गर्न थल्नु वयो।मेरो लिङ सरै वग्यमनि वयो। मेर ओथ् ले उहको ओथ् ६उनु अघि नै मेरो लिङले उहक रत नरम् ओथ् ६उन पयो। बिस्तरै भौजु ले अफ्नो जिब्रोले मेरो लिङ लै जिस्कौदै आफ्न चलख् नयन् ले मथि तिर मलै हेर्नु वयेको थियो। म पगल् हुदै थिये र मेरो आख र भौजु क आख जुदिरहेक थिये। मेरो लिङले हल्क ओइल्य् पनि निकले प६इ भौजु मुसुक्क हस्नुवयो अनि आफ्न रत ओथ् खोलेर मेरो लिङ लै अफ्नो मुख् म लिनुवयो। ओहो! मलै एक्दुम् मज हुन थल्यो। भौजु को मुख् को न्यनोपन् र जिब्रो को चतैले मेरो लिङ झन् फुल्न थल्यो। भजु ले बिस्तरै अफ्नो तौको हल्लौदै मेरो लिङ म अफ्नो मुख् तल मथि गर्न थल्नु वयो। मलै भौजु येति सम्म फोर्वर्द् हुनुहोल जस्तो लगेको थियेन। करि ५ मिन् प६इ म पग्लन थले”ओह् भौजु वयो वयो” म पनि उहको मुख् म अफ्नो पुर लिङ् कोच्न थल्न लगे। भौजु ले पनि झन् झन् मेरो लिङ चुस्न थल्नु वयो। म करये”भौजु वयो, मेरो निस्किन लग्यो मुख् हतौनुस्” भौजु झन् मेरो लिङ लै अफ्नो मुख् वित्र सम्म लियेर चुस्न पो थल्नु वयो। मेरो पलो, मैले पनि उहको मुख् म आफ्नो बिर्य निकलिदिये। भौजु ले झन् मेरो लिङ लै मुख् वित्रै येसरि चुसि रहनु वयो कि मनौ उह स्त्रव् बत जुइके चुसिरहनु वयेको ६अ। उहको मुख् बत बिर्य धेरै वयेर होल बिर्य उहको मुख् बत पनि बहिर निस्क्यो। भौजुले मेरो बिर्य पिउनु वयो र मेरो लिङ चतेर सफ् गरिदिनु वयो। अनि आफ्नो मुख् बहिर गम्छले सफ् गर्नु वयो। म बोले “भौजु मरिजम् मैले त आफैलै वुले निकै मज वयो।” मेरो लिङ कुरि जस्तो वैसकेको थियो। भौजु मुस्कौदै वन्नुवयो।” धत्! असलि मज त तव आउ६अ जव मेरो पुति म हजुर् को लदो हुन्६अ, यो त तयरि मत्र हो” मैले लमो सस् लिदै वने “मलै त अव पुग्यो भौजु।” भौजु हस्दै बोल्नु वयो” हेर त कस्तो बच जस्तो कुर गरेको! चिक्दै नचिकि वयो रे। ल अव तपै पनि मेरो पुति चत्नुस्।” मैले सोचे, हो त म पनि कस्तो बुद्दु भौजु को योउनि नै नहेरि र सम्भोग् नगरि पुग्यो वन्ने, भौजु को पनि मन् पुर्यैदिनु पर्६अ।
म पनि खुसि सथ् उथे। भौजु उत्तनो पर्नुवयो। मैले भौजु को पेत्तिकोत् मथि सर्कये। भौजु मलै रोक्दै बोल्नु वयो”पख्नुस् है त बबु,” भौजु ले आफ्नो नितम्ब उचलेर सुति सुति आफ्नो रेद् पन्त्य् खोल्नुवयो। अनि आफ्नो पेत्तिकोत् लै समतेर अफ्नो कम्मर् उथौनुवयो र सुति सुति पेत्तिकोत् लै अफ्न नितम्ब वन्द पनि मथि सर्कौनु वयो।
अव उहको पेत्तिकोत् उहको कम्मर् वन्द मथि थियो। मेरो अगदि भौजु को योउनि उजगर् वयो। पैलो पतक् मैले कुनै स्त्री को योउनि येति नजिक् बत देखेको थिये। मलै अनौथो मज आउन थल्यो येस्को पर्तिकृय मेरो लिङ ले गरि रहेको थियो। उहको योउनि मा रौ ६ऐन वन्द पनि हुन्थ्यो। मलै अचम्म लग्यो। येस्तो कलो र बक्लो केश् वयेकि मेरि भौजु को योउनि म वने येति पतल र खैर रौ कसरि वये। जेहोस् उहको योउनि एक्दुम् ६अर्लङ थियो। एक्दुम् सुन्दर् लग्यो मलै उहको योउनि। उहको योउनि म तेति रौ नहुनले ६७ साल् कि बचिको जस्तो लग्थ्यो। म उहक मोत गोर तिग्र फेस्ययेर तेस्क बिच् म बसे। उहको योउनि निकै सन्त थियो तर मैले उहको योउनि लै अफ्न हथ् ले ६उन थलेप६इ उहको योउनि पौरोति जस्तो फुक्न लग्यो। उहको योउनि एक्दुम् नरम्, न्यनो र मसुम् थियो। मैले भौजु को योउनि म बदो मुस्किल् ले एउत औल हले। अनि उहलै हेर्दै वने” भौजु तपैको माल् म मेरो जदैन होल!” भौजु उतिखेरै बोल्नुवयो”तपै खुरुक्क न अफ्न औल वित्र बैर गर्दै मेरो पुति चत्नुस् त, जन्६अ कि जदैन प६इ थह हुन्६अ” म पनि”हवस्” वन्दै अफ्न औल वित्र बैर गर्न थले र अफ्न जिब्रो ले उहको योउनि वरिपरि चत्न थले। भौजु को योउनि बिस्तरै गिलो हुदै थियो। उहको सिस्करि सुनेर म अदियेर भौजु को दुइ तङ् को बिच् बत तौको उथयेर भौजु लै हेर्दै वने” के वो भौजु” भौजु मसग झन्नक रिसौनु वयो” जेसुकै होस् तपै चत्नुस् न, मज लगेर हो दुखेर हैन” मैले कुर बुझे। मेरो औल ले वन्द भौजु लै मेरो जिब्रो ले मज दिदै रहे६अ। मैले भौजु को योउनि को भगन्कुर् केइ बेर् जिब्रो ले चते र अफ्न दुइ ओथ् ले मजले उहको भगन्कुर् चुसे। भौजु ले”ओएए।।स्स्।स्।स्,ओउह्।स्।।स्स्” गर्दै सिस्करि ६ओद्नु वयो।
मलै जोश् आउन थल्यो। मैले भौजुको भगन्कुर् केइ बेर् चुस्दै दात् ले पनि तोक्न थले। अनि औल ले उहको योउनि द्वर् म मजले घोच्न थले। भौजुले एक्कसि मेरो तौको अफ्न हथ् ले दबौनु वयो अनि बोल्नु वयो”बबु आउ।। मेरो त्क्(भगन्कुर्-लोकल् लङुअगे) ६अदिदिनुस् ।।अव पुति चुसिदिनुस्।” मैले अफ्न औल उहको योउनि मुख् बत निकले अनि उहको योउनि मुख् म अफ्नो मुख् जोदे। मेरो नक् भौजु को भगन्कुर् म तसिन पुग्यो। मैले उहको योउनि वित्र अफ्नो जिब्रो घुसयेर मुख् घुमै घुमै उहको स्वदिलो रस् चत्न थले। येसो गर्द मेरो नक् उहको भगन्कुर् म रगदिन्थ्यो जस्ले गर्द भौजु झन् मस्त् हुन पुग्नुहुन्थ्यो। मैले मजले उहको योउनि मुख् म मुख् जोदेर चुसिदिये अनि उहको योउनि ल्यप्ल्यप्ति चत्न थले। भौजु २ पतक् पतन् वैसक्नु वयेको थियो र तेस्रो पतक् पनि उहको योउनि बत खुब् रस् निस्क्यो। मैले उहको रस् चतेर फेरि उहको योउनि सफचत् बनैदिये। उहको योउन् रस् मह जस्तो बक्लो तर कम् गुलियो र धेरै नुनिलो थियो। जेहोस् एक्दुम् स्वदिस्त बेग्लै तस्ते थियो तेस् रस् को। भौजु ले मेरो तौको अफ्नो योउनि बत हतौदै भन्नुवयो”ल बबु येत आउनुस् अव तपैको लदो मेरो जिम्म म दिनुस्।” म भौजु को कुर मनेर नङै भौजु को सिरनि तिर गयेर बसे।
मेरो लिङ हेरेर भौजु हस्दै बोल्नु वयो”लौन नि कति ६इतो तयर् वयेको हजुर् को लदो! खै एक्६इन् मुसरु त येस्लै” भौजु ले मेरो लिङलै अफ्न दुइ हथ् ले हल्लौन थल्नु वयो। मैले पनि आफ्न दुबै हथ् ले भौजु क कसिल, नरम् नरम्, गोल् गोल् र पुस्तेक दुबै स्तन् मोलेर खेलौन थले। भौजु मेरो लिङ लै हथ् ले तल मथि गर्दै बोल्नु वयो” बबु मज ले दबै दबै मसलिदिनुस् मेर दुध् लै” मैले तेसै गरे। मेरो लिङ फेरि सिध खद वयेर भौजु को मुथिम अतयेन। भौजु ले मेरो अनुहर् म हेर्नु वयो। म भौजु को स्तन् म मग्न थिये। भौजु ले मलै कर्के नजर् ले हेर्दै वन्नु वयो”भौजु को दुध् चुस्न मन् लग्य ६ऐन? मन् लगे चुस्नुस् निकै मज आउ६अ।” ं के खोज्६अस् कन आखं वनेझै मैले भौजु क स्तन् क मुन्त अफ्नो ओथ्ले चुसे वने अर्को हथ् ले उहको अर्को स्तन् दबौन थले। म बचले आमको दुध् चुसे झै गरि भौजुको स्तन् चुसि रहेको थिये। भौजु क स्तन् झन् फुल्न थले। भौजु मस्त् सित आख बन्द गरेर सिस्करि ६ओद्न थल्नु वयो। केइ बेर प६इ मैले भौजु गलम मोऐ गर्न थले। भौजु ले आख खोल्नु वयो अनि मुसुक्क हसेर बोल्नु वयो” येस्तो बेल मा मर्द ले मोऐ खने वनेको ओथ् म हो, गाल म हैन” अनि मैले भौजुको कुर बुझेर उह लै किस्स् गर्न थले। भौजु को नरम् रसिल ओथ् चुस्न निकै मज आयो। भौजु ले पनि मेरो ओथ् चुस्नु वयो। केइ बेर प६इ भौजु ले अफ्न दुबै हथ् ले मेर गाल समत्दै वन्नुवयो” बबु अव त हजुर् को लदो र मेरो पुति एक् अर्कक लगि तयर् छन्। लौ अव अफ्नि भौजु को पुति चिकेर जीवन् को नै पैलो चिकै को अनुवव् लिनुस्।” म “हवस्” वन्दै उथेर भौजुक सेत, मोत र आकर्सक् दुइ तिग्र को बिच् म गये।
भौजु आफैले दुइ तिग्र फेस्ययेर पुति थप्नु वयो। मलै अचम्म लगिरहेको थियो, मेरो ९” को लिङ कसरि भौजु को योउनि को त्यो सनो छिद्र म जल वनेर। भौजु म तोलको देखेर बोल्नु वयो।” के वयो बबु तपैलै? पैलो पतक् देख्नु वको होल पुति, धोको पुग्ने गरि हेर्नुस्। हुन त अघि चति पनि सक्नु वको हैन र? के हेरेको लाज् नै लग्ने गरि?” मैले “तेस्तो केइ हैन भौजु”वनेर भौजु को योउनि द्वर् म अफ्नो लिङ जोदेर, भौजु मथि चदे। टेस्प६इ उहको दुइ हथ् समतेर मैले एक् झत्क मरे। मेरो लिङ उहको योउनि बैर चिप्लेर उहको भगन्कुर् म धसियो। भौजुले मेरो लिङ समतेर फेरि अफ्नो योउनि को छिद्र म जोद्दै वन्नु वयो” अलि आरम् ले सोझयेर हन्नुस्, नय सिकरि को निसन येस्तै हो, अलि सोझौनुस् बबु” मैले हुन्६अ वनेर अर्को झत्क मरे। मेरो लिङ २ ” मत्र वित्र गयो। भौजु “ओउच्।।ऐय।।” गरि हल्लनु वयो। म “सोर्‍य् भौजु” वन्दै अदिये।
भौजु फेरि बोल्नु वयो” बबु चिक्ने बेलम मय दय देखौने हैन खुरु खुरु चिक्नुपर्६अ, मलै जस्तो अरु कुनै केति लै गर्नु वयो वने उस्ले तपैलै कैलेइ चिक्न दिन्न। डुखै लै ६इतै पर् लगैदिनुपर्६अ। येसरि लदो ले एक् झत्क मरेर अदिनु वयो वने त।।।” मलै भौजु को कुर सै लग्यो। मैले भौजु क दुइ स्तन् समतेर फेरि वित्र एक् झत्क मरे”ओउ ओउ मरे नि आम” मेरो लदो ४ ” वित्र वैसकेको थियो। मलै निकै मज आयेको थियो तर भौजु को ६अत्पतै ले गर्द मैले अर्को झत्क हन्न सकिन। डै ले पनि भौजु सग सम्वोग् गरेको होल तेइ पनि भौजु को योउनि किन येति कसिलो होल!मेरो लिङ मोतो वयेर हो कि खै! भौजु को योउनि बत रगत् निस्क्यो। म दरले कप्दै बोले”भौजु के वयो, भौजु रगत् बग्यो तपैको पुति बत,।। तपैलै दैले कैलेइ चिक्नु वथेन हो?” भौजु रिश् ले करौनु वयो” हजुर् को लदो जति थुलो वये पनि हजुर् बच नै हुनुहुदो रै६अ। टपैको दै को लदो तपैको जस्तो वयेको वये मैले तपैलै चिक्ने मौक दिन्थे। टपैलै मैले वनेकि हैन चिक्ने बेलम दय मय सम्मन् केइ चहिदैन वनेर अव म मर्ने नै वये पनि चिक्न न६अद्नु। टपैको लदो थुलो ६अ तेसैले रगत् आको, तर येस्तै लदो ले नै मज दिने त हो नि।”(नो मेर्क्य् नीद् इन् फुक्क्)”। मैले “हुन्६अ, हुन्६अ” वनेर अर्को झत्क लगये। मेरो लिङ भौजु को योउनि म ५” गयो। उहको योउनि एक्दुम् कसिलो थियो। भौजुले मेरो तौको समतेर मेरो गल म चुम्दै लमो लमो स्वस् ले वन्नुवयो” बबु अव अफ्नो लदो लै पुति बहिर वित्र गर्नुस्, तर् पुति वन्द बहिर वने ननिकल्नु मत्र हल्क तन्दै फेरि धक्क दिदै गर्नुस् त मेरो पुति म” मैले तेसै गरे।
मैले भौजुको योउनि म आफ्नो लिङ वित्र बहिर चलौन थले। मेरो लिङ ४” अझ बहिर थियो तेइ पनि भौजुको योउनि म अफ्नो लिङ हल्द मलै निकै मज मिलिरहेको थियो। भौजु पनि अव मस्ति लिदै हुनुहुन्थ्यो। भौजुको योउनि बत फेरि पनि जुइके निस्क्यो। अव झन् भौजुको योउनि एक्दुम् गिलो र चिप्लो वो जस्ले गर्द मैले भौजुलै सजिलै धक्क दिन सके। मेरो जोद्दर् धक्कले मेरो लिङ भौजुको योउनि म करिव् ७” जन सफल् वयो। भौजुले मेरो नितम्ब म अफ्नो हथ् ले दबब् दिदै वन्नुवयो” बबु अव सकेजति अफ्नो लदो घुसौनुस्, मज्जले धक्क मर्नुस् मेरो नरम् पुतिम” मैले “हवस्” वनेर भौजु को दुइ तिग्र अझ फतये। भौजु ले “पख्नुस् बबु” वनेर अफ्नो दुइ तै तिग्र उचलेर मेरो नितम्ब म रख्नुवयो।अनि वन्नुवयो”ल बबु अव अफ्नो भौजु को पुति लै सकेजति चिक्नुस्” । भौजु को योउनि मेरो लगि झन् खुल्ल वयो। मैले लगतर् पोवेर्फुल् धक्क क सथ् भौजु को योउनि म आफ्नो लिङ हल्न थले। हर् झत्कम मेरो लिङ अलि अलि गरि भौजु को योउनि वित्र थप् जदै थियो। र मलै स्वर्गिये आनन्द मिल्दै थियो। अव भौजु पनि अफ्नो नितम्ब उचलि उचलि मेरो लिङ म आफ्नो योउनि घुसौन थप् पर्यस् गर्न थल्नुवयो। भौजु को तदप् देखि मैले पनि भुजुको मुख् म चुम्बन् गरि येस्तो झत्क मरे कि भौजु ले अफ्नो नितम्ब प६अर्नुवयो र ऐनियेर आफ्नो सीर् हल्लौन थल्नुवयो। मेरो पुर ९” लिङ अव भौजुको गुप्तङ वित्र पुरै घुसेको थियो। मैले भौजु को चुम्बन् लिदै हल्क हल्क अफ्नो लिङ ले उहको योउनि वित्र मलिश् गर्न थले। भौजु लै अलि आरम् मिलेप६इ फेरि भौजु बोल्न्वयो”लौ न बबु अव भौजुलै दय नगरि मज्जले चिकिदिनुस् उम् उम्।।”
मैले अव आफ्नो लिङ भौजु को योउनि म दनदन् दिन थले। मेर अन्दकोश् भौजुको नितम्ब म थोकियेर”त्वक् त्वक्” बज्दै थिये। म भौजुको गोल् गोल् स्तन् मोल्दै उहको चुम्बन् लिदै उहसग सम्वोग् गरिरहेको थिये। भौजु क हथ् क चुर ६अ्६अ् बज्दै थिये, केइ त तुते। भौजु पनि मेरो पेर्फेक्त् लिङ् को मज लिदै हुनुहुन्थ्यो। भौजुको योउनि ले फेरि रस् निकल्यो। अव मैले उहको योउनि म लिङ हल्द खेत् म धन् रोपेजस्तो आवज् आइरहेको थियो। मैले लगतर् १५ मिन् भौजुको योउनि म झत्क मरिसकेको थिये। अव म पगल् हुदै थिये। मेरो गति झन् बद्न थल्यो। भौजु पनि कन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलै आफु बग्न लगेजस्तो लग्यो। मैले थप् ४ झत्क गहिरो तरिकले मरे अनि बर्बरौदै बोले”भौजु म सक्दिन अव” भौजु आफैले नित्म्ब उथयेर् थप् ४ सर्क लगौनु वयो अनि वन्नुवयो”बबु भौजुकै पुति म पनि निकलिदिनुस्” मैले दुइ शोत् अझ लगये। भौजु को योउनि ले मलै वित्र वित्र तनिरहेको थियो। मैले अचनक् भौजुको योउनि वित्र पनि निकले। भौजुको योउनिले पनि न्यनो पनि निकल्यो। म आफ्नो लिङ उहको योउनि बत ननिकलि उहकै मथि धल्न पुगे। भौजुले लमो सस् फेरेर मेरो केश् सुम्सुम्यौदै बोल्नुवयो”बिचर बबु, निकै गल्नुवयो, ।कस्ति लग्यो हजुर्लै आफ्नि भौजु?” मलै भौजु पहिलै पनि रमृ लग्थ्यो। टर उहसगको योउन्सम्पर्क प६इ उह मलै निकै कमुक् लग्यो। मैले थकेको स्वर्म बिस्तरै बोले”भौजु तपै निकै सेक्स्य् हुनुहुदोरै६अ, उ र् सो स्वीत्,सो स्वीत् भौजु।” भौजु मुसुक्क हस्दै बोल्नुवयो”बस्तव् मै हजुर् ले मलै निकै आनन्द दिनुवयो। हजुर् को त पैलो पतक्, हजुर् लै मज त हुने नै वयो, तर मलै पनि येस्तो मज पैलो पतक् मिलेको हो।” म बोले”भौजु हजुर्को पुति निकै तिघ्त् रहे६अ” भौजु::”बस्तविक् लदो त मेरो पुतिले आजै पयेकि हो, तेसैले हो बबु, हेर्नुस् त तपैले भौजुको पुति कस्तो बनैदिनु वयेको ६अ।”
मैले केइबेर प६इ उहको योउनि बत अफ्नो सुकेको लिङ निकले अनि उथेर उहको योउनि हेर्न लगे। भौजुको योउनि को सनो छिद्र अव सनो दुलो वयेको थियो। उहको योउनि एक्दुम् रन्थमैलो देखियेको थियो। उहको योउनि मुनिको बेद्-शीत् म हल्क रगत् र हम्रो बिर्य ६अरपस्त वयेर विजेको थियो। उहको योउनि बत अझ पनि बिर्य तप्किरहेको थियो। मलै भौजुको योउनि देखेर भौजु पर्ति दय जग्यो। मैले बोले”हजुर् ले नै गर्द हजुर् को पुति को येस्तो सम्म हलत् वको हो नत्र म बिस्तरै गर्ने थिये” भौजु ले मेरो गालम थप्थपौदै वन्नुवयो”देवर् बबु दुखै मा त मस्ति हुन्६अ।
टेसैले आइमलै थुल थुल लदो सग चिक्ने मन् हुन्६अ। हेर्नुस् न म अवगिनि को वाउ म हजुर्को दै को सनो लुत्रे लदो पर्यो तर वग्वन् ले तपैजस्तो देवर् दियेक रहे६अन् ” भौजु उथ्नुवयो। उहको पेत्तिकोत् आफै तल झर्यो। उह नङै अफ्न कसिल नितम्ब हल्लौदै हिद्नुवयो। उहको हिदै देखेर मलै उह अपङै वये जस्तो लग्यो।मैले सोधे”भौजु के वयो” भौजु म तिर फर्केर दन्ते लहर् खोलि मुस्कौदै वन्नुवयो।” अघि को करमत् हो अव दुइ चर् पतक् रात् म मर्ने गरि चिकिदिनु वयो वने सहि थौम आउ६अन् मेर तिग्र क जोर्नि हरु” भौजु बथ्रूम् गयेर आफ्नो योउनि सफ् गर्नुवयो। म पनि आफ्नो लिङ सफ् गर्न गये। मेरो लिङ चिसो पनि म पखल्द मलै चहर्ययो। हमि देवर् भौजु एक् अर्कलै हेरि हस्योउ। टेश् रात् मैले भौजुसग ४ पतक् जति सम्वोग् गरे। भौजु येति सम्म कमुक् हुनुहुन्थ्यो कि कतिपतक् त उह म मथि चदेर आफैले मेरो लिङ म योउनि वित्र बहिर गरनुहुन्थ्यो। भोलि पल्त बिहन् भौजुले मलै ततो चिय दिदै मेरो निन्द्र खुलैदिनुवयो।
बिहन् चिय पियेर म नुहै फ्रेश् वये। म कित्चेन् कोथम गये। भौजु खन बनौदै हुनुहुन्थ्यो। उहले रतो सदि लगौनु वको थियो। ट्यो सरी उहलै खुब् जचेको थियो। म प६अदि कुर्चि म बसेर भौजुक नितम्ब हेर्दै तोल्हैरहेको थिये। भौजु ले मलै हेर्दै वन्नुवयो”के हेरेको बबु? भौजुको चक् मन् पर्यो कि क्य हो हेर्न मन् लग्यो वने वन्नुस् आज मैले पन्त्य् पनि लको ६ऐन” भौजु म प्रति उदर् हुदै जिस्किदै हस्दै हुनुहुन्थ्यो। म बोले” देखौनुस् न त।” भौजु मुसुक्क हस्दै बोल्नुवयो” हजुर् लै त भौजुको चक् पनि मन् पर्यो है, ल हेर्नुस् मन् भर्नेगरि” भौजुले आफ्न सरी र पेत्तिकोत् दुइतै आफ्न हथ्ले समतेर कम्मर् मथि सम्म मेरै अगदि फर्कैदिनु वयो। उहको गोरो र पुस्तेक नितम्ब देखि मेरो लिङ फेरि जग्न थल्यो। भौजु ले हस्दै वन्नुवयो”के खौल नै गरि हेर्नुवको अर्कको चक्, भौजुको चक् नै चिक्ने बिचर् त गर्नु व को त ६ऐन!, मलै थह् ६अ हजुर्को लदो थन्किसक्यो मेरो चक् देखेर” भौजुको मुख् बत “चक् चिक्ने मन् त गर्नु वको हैन” वन्ने कुर सुनेर मेरो हलत् खरब् वो। मैले आजसम्म ब्लुए फिल्म् म पनि गुद्-द्वर् मैथुन् देखेको थियीन तर सुनेको थिये। भौजु को मुख् बत यो कुर सुनेर म जोश् मा आये। भौजु को योउनि मैथुन् त धेरै पतक् गरेको छु तर उहको मल्-द्वर् म मैले अफ्नो गुप्तङ् हलेको वने थियीन, मैले सोधे”भौजु हजुर् ले आफ्नो चक् पहिले देखि नै चिकौनु हुन्थ्यो?” भौजुले आफ्नो सरी र पेत्तिकोत् तल झर्दै बोल्नुवयो।” उह, मैले चक् चिककि ६ऐन। टर मलै थह ६अ धेरै केत हरुलै आइमैको चक् चिक्न मन् पर्६अ।” म खुसि भयेको देखेर भौजु ले सब्जि म पनि हेलेर, म तिर फर्केर एउत आख झिम्कयेर मजक् गर्दै वन्नुवयो”हजुर् कि भौजुले अफ्नो देवर् को लगि वनेर अफ्नो कुमरि चक् सचेकि ६ए। जे गर्न मन् लगेको ६अ, खन खये प६इ गर्नु होल, अहिले मलै एक्दुम् भोक् ले सतको ६अ” हिजो को कस्रतले मलै पनि भोक् लगिरहेको थियो तेसैले मैले”हवस् भौजु” भने।
खन खयेपछि मैले बहिर कोथको धोक लगये। अनि भौजुको कोथम गये। मलै देख्ने बित्तिकै भौजु मुस्कौनु वयो। मैले भौजुलै प६अदि बत समतेर उहको सरी बहिर बत नै उहको नितम्ब म अफ्नो उत्तेजित् लिङ बिस्तरै दल्न थले। भौजे ले म तिर सर् मोद्दै वन्नुवयो” बबु तपैले मेरो चक् चिक्ने बिचर् गर्नु वयेको हो,?” मैले वने”हो भौजु हजुर्को चक् निकै सेक्स्य् लग्६अ, आज मलै आफ्नो चक् चिक्न दिनुस्” अनि म भौजु को सरि र पेत्तिकोत् उचलेर उहको मल्द्वर् म लिङ घुसौने मेसो मिलौन लगे। भौजु अचनक् हस्दै मलै झपर्न लग्नुवयो”धत्! के गरेको? चक् चिक्न येति आरम् हुन्६अ नि!? टपै पनि सरै नहुने। मेरो पुति म त मुस्किल् ले ६इरेको हजुर्को लदो मेरो चक् म तेसै ६इर्६अ। पुति म जस्तो चक् म फुसि आउदैन वन्ने थह ६ऐन तपैलै” मैले मफि मग्दै भौजु सग सोधे”उसो भये के गर्नु?” भौजुले मलै मुसर्दै भन्नुवो” बथ्रूम् आउनुस्” म बथ्रूम् गये। बथ्रूम् ६इर्ने बित्तिकै भौजुले सरि खोल्नुवयो। अनि पेत्तिकोत् उचलेर मलै वन्नुवयो”मलै नुहौने मन् ६ऐन, बस् मेरो चक् म मत्र सबुन् पानि लगौनुहोस्। अनि आफ्नो लदो म पनि तेस्तै लगौनुस्।” मैले तेसै गरे। भौजु ले भन्नुवयो”ल अव मेरो चक् म औल हल्नुस् त” मैले भौजुको गुद्-द्वर् म औल हले। मेर दुइ औल एकैपतक् भौजुको मल्द्वर् म ६इर्यो। सचि नै सबुन् ले सजिलो बनौदो रै६अ। मैले भौजुको मल्द्वर् म लिङ हल्न लग्द भौजुले निहुरियेर सजिलो बनैदिनु वयो। मैले हल्क मिहेनत् म नै भौजुको मल्द्वर् म पुर एन्त्र्य् पये। अनि सर्क लगौन थले। म आफ्नो लिङ निकल्दै भौजुको मल्द्वर् हेर्थे। उहको तेहको दुलो निकै थुलो देखियो। भौजु बोल्नुवयो। “ल मेरो मुजि धोइदिनुस् र फेरि आफ्नो लदो घुसौनुस् अनि मेरो दुइ घुद समतेर मलै जुरुक्क उथौनुस् तर लदो लै मेरो चक् मै घुसको हुनुपर्६अ अनि मलै बेद् म लगेर चिक्नुस्, अव मेरो चक् खुलिसकेको छ, ”
मैले भौजुको मल्द्वर् पानि ले पखले र मेरो लिङ पनि पखले। टेस्प६इ मैले भौजुको मल्द्वर् म फेरि लिङ हले। अनि उहको दुबै घुद समतेर उहलै उचले। मैले भौजुलै पैलो पतक् उचलेको थिये। मेरो लिङ भौजुकै मल्द्वर् म थियो। मैले भौजुलै उचलेर उहकै बेद् म ल्यये। भौजु ले”पख्नुस् वन्दै मेरो लिङ आफ्नो मल्द्वर् म रखि कुकुर्नि को आसन् म बस्नुवयो अनि हस्दै वन्नुवो”ल अव भौजुको चक् चिक्नुस्।” मैले भौजुको नितम्ब मजले हन्न थले। भौजु सिस्करि ६ओदेर मज लिदै हुनुहुन्थ्यो। मेर अन्दकोश् उहको योउनि म थोकिन्थे। मैले मन् वर्ने गरि उहको मल्द्वर् हने।
मेरो भाउजु चिकाई Nepali sex story nepali sexy story, nepali sexy stories, nepali adult story, nepali adult stories, www.nepali sexy stories,nepali puti pics
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	May 28, 2015 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Tagged १५ बर्से जवानी को आगो, 24 hour nepalisex, 69 position, adult girls sex stories, adult nepali, afnai chori lai chikeko, bathroom sex, bhabhi sex, bhauju lai chikeko, boss wife fucked, chikeko katha, chikeko video, classroom sex, college sex, deepa lai chikeko, didi bahini ko chartikala, hot girls, kasari chikne, kurini lai chikeko, lado puti, nepali hot stories, nepali sex story, puti pyas, sali lai chikeko, sex in college, sex letter, sex story, tight puti virgin, Watch Porn Live wrong number, अनिताको चाकमा पनि चिकियो, अन्टीलाई चिकेको, आइमाइको स्वाद, आफ्नै बाउले रन्डि बनायो, ईन्टरनेटमा भेटेको एस्तो पो चिकाइ, कलेज रोमान्स, काकीलाई चिकेको, काकीसँग काल्ना को डिलमा, कुमारी केटी, कोदोबारीमा चीकेको, खैरेनीलाई चिकेको, गाउँले बहिनी, गाउले भाउजु चाक चिकाइ, चिकाई चिकेको कथा, चिकाई प्याश, चिकेको कथा, चिकेको प्याश, जवनीको जोस, जवानी टाइट पुती, ठन्केको लाडो, डग्गी स्टाइल, डान्स रेष्टुरेण्टको डान्सर, दाजु बहिनि चिकेको, दिदीलाई चिकेको, दिपा भाउजु चिकेको, दुबइमा अन्टी लाई चिकेको, नाङ्गो फोटो, नितालाई चीकेको, नेपाली सेक्सी कथा, नेवारनी भाउजु sex story, पण्डितको बुहारी चिकेको, पण्डितको बुहारीको चर्तीकला, पत्रकारको बुढि चिक्दा, पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा, पहिलो सेक्स, पार्बति पुतिको प्वल, पुतिमा हात, प्रियालाई चिकेको, बसमा चिकेको, बहिनीलाई चिकेको, बाथरुमबाट फर्केर आउँदा बिकासको लाडो, बिदेसमा पनि चिकेको, ब्लु भिडियो, भर्जिन केटि, भर्जिन केटिलाई चिकेको, भाउजु चिकेको, भाउजुलाई चिकेको, भाउजुसँग माइजुलाई चिकेको, मायालाई चिकेको, मालिस गर्दा चिकेको मिसलाई चिकेको, मेरी हट माईजु, मेरो चिकेको काहानी, मेरो जवानीको रंग मेरो पहिलो संभोग, मेरो पुतीमा चिकेको katha, मेरो यौनको पहिलो अनुभुती, म्यानेजर कि बुढि चिक्दा, यौन पत्र, रिमा भाउजु लाडो चुसिदीईन, लाडो तेतिकै ठन्केको ठन्केकै छ, लाहुरेकी बुढी चिकेको, साथीको आमालाई चिकेको, साथीको सेक्सी आमा, सानिमालाई चिकेको, सानिलाई चिकेको, सालीलाई चिकेको, सिस्टर चिकेको, सुनिता सेक्स पार्टनर, सोलुको चिकेको कथा, स्कुल होटेलको दिदी ११ बर्से केटो सङग चिकाउदा	Post Permalink
← ११ बर्से केटो सङग चिकाउदा	Dewar Bhabhi Hindi Audio sex story →